သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်နိုင် | They Could Not Enter In Because of Unbelief | Real Conversion
သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်နိုင်
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၉)ရက်၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း
အသင်းတော် သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသော ဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Morning, February 19, 2012
“သင်တို့သည်ငါ၏ချမ်းသာခြင်းသို့မဝင်ရကြဟု ကျိန်ဆိုတော်မူသော သူတို့ကား၊ မယုံကြည်သောသူမှတပါး အဘယ်သူနည်း၊ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့်သာ မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့ သိမြင်ကြ၏။ (ဟေဗြဲ ၃း၁၈-၁၉)
ဓဣြွသရေလလူမျိုးတို့ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကတိတော်နှင့် စပ်ဆိုင်သောခါနန် ပြည်သို့ ခေါ်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်သည် အပြစ်ကိုပုံဆောင်ပါသည်။ ခါနန် ပြည်သည် ကောင်းကင်ဘုံကို ပုံဆောင်ပါသည်။ (၁၆၉၇-၁၇၇၁ခုနှစ်၊ ဂျွန်ဂီးလ် ပြော ကြားခဲ့သည်မှာ “ခါနန်ပြည်သည် ကောင်းကင်ဘုံကိုပုံဆောင်ပြီး၊ ဘုရား၏ လူထုတို့သည် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုသူတို့သည် ခါနန်ပြည်ကို မဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်းဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, volume III, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, p. 391; comment on Hebrews 3:11).
“ထို့ကြောင့်သူတို့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရကြဟု အ မျက်ထွက်၍ ငါကျိန်ဆိုသည်ဟု မိန့်တော်မူချက်ရှိသည်နှင့် အညီ” (ဟေဗြဲ ၃း၁၁)။
၁၆၂၄-၁၆၇၉ ခုနှစ်မက်သရူးဖူးလ်က ထိုကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သက်၍ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “သူတို့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရဟူ၍ ပြောကြား သည်တွင် အကယ်၍သာ သူတို့သည်ချမ်းသာခြင်းထဲသို့ ဝင်ခွင့်ပြုမည်ဆိုလျှင်၊ ထိုဘုရားသည် စစ်မှန်သောဘုရားဖြစ်မည်မဟုတ်ဟု ပြောခဲ့သည်၊ တရားဟောရာ ကျမ်း ၁၂း၉၌ အ ထူးသဖြင့် ခါနန်ပြည်ကို ကောင်းကင်ဘုံကဲ့သို့ ပုံဆောင်ထားပြီး၊ ထိုသူတို့ကို အမွေခံရာ ချမ်းသာခြင်းထဲအဝင်မခံဘဲ၊ ဝမ်းနည်းကြေကွဲခြင်း၊ နာကျင်စွာခံစားရခြင်း၊ စိတ်သောက ရောက်ခြင်းနှင့်ဒုက္ခဝေဒနာများ ပြည့်နှက်ရာ အမွေခံရာချမ်းသာနှင့်မတူသော ဆန့်ကျင်ဘက်နေရာ”ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ (Matthew Poole, A Commentary on the Whole Bible, volume III, The Banner of Truth Trust, 1990 reprint, p. 821; comment on Hebrews 3:11).
ဘုရားသခင်အမှန်စင်စစ် မိန့်တော်မူသည်တွင် “အမျက်ထွက်၍ ကျိန်ဆို သည်”ဟူ၍ မိန့်တော် မူရာတွင်၊ “ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြ”ဟု ဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ် သည်။ (ဟေဗြဲ ၃း၁၁) ရှေ့ခေတ်ဂျူးဥပဒေကို သင်ကြားပို့ချသူတို့ ပြောကြားခဲ့ သည်မှာ၊ “ကန္တာရမျိုးဆက်တို့သည် ဤကမ္ဘာ၌ မရှိကြတော့ပေ”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ သည်။
အဘယ်ကြောင့်သူတို့သည် ကတိတော်တိုင်းပြည်ကို ဝင်စားကြမည့်အစား သဲကန္တာရ၌ လှည့်လည်ရကြသနည်း? သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော်မမူသည်မှာ၊ “သို့ ဖြစ်၍ သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့်သာ မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့သိမြင်ကြ၏” (ဟေဗြဲ ၃း၁၉) ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ ထိုကျမ်းပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်နှင့်ပါတ်သက်၍ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ခါနန်ပြည်သည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ကျေးဇူးတော်နှင့်ဆိုင် သောပဋိညာဉ်တရား၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ယုံကြည်သူတို့အဖို့ ရည်ညွန်းပြီး ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါက၊ ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ခံစားခွင့်မရရှိကြပေ။ မယုံကြည် သူတို့အဖို့မူကား မီးငရဲပင်ရှိသည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ အိုအရှင်ဘုရား၊ ကိုယ် တော်သည် ကြောက်ရွှံ့ဖွယ် အပြစ်ငရဲ့မှ ထိုသူတို့ကို လွတ်မြောက်စေတော်မူပြီ” (C. H. Spurgeon, “An Earnest Warning Against Unbelief,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, volume LVI, Pilgrim Publications, 1979 reprint, p. 470; comment on Hebrews 3:18-19).
“သင်တို့သည် ငါ၏ချမ်းသာခြင်းထဲသို့ မဝင်ရကြဟု ကျိန် ဆိုတော်မူသော သူတို့ကား၊ မယုံကြည်သောသူမှတပါး အ ဘယ်သူနည်း၊ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် မယုံကြည်သော ကြောင့်သာ မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့သိမြင်ကြ၏ (ဟေဗြဲ ၃း၁၈-၁၉)။
အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မယုံကြည်၍ သဲန္တာရ၌လှည့်လည် သွားလာကြသော ဣသရေလလူတို့နှင့် ပါဝင်ပတ်သက် နေကြရသနည်း? အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော်၊
“ထိုအကြောင်းအရာရှိသမျှတို့သည် (ပုံသက်သေ) ဖြစ်အံ့ သောငှါ ထိုသူတို့၌ ရောက်ကြ၏။ ကပ်ကာလအဆုံးတွင် ဖြစ်သော ငါတို့ကို ဆုံးမစရာဖို့ကျမ်းစာ၌ ရေးထားလျှက်ရှိ သနည်း။” (၁ကော ၁ဝး၁၁)။
မယုံကြည်ကြ၍ သဲကန္တာရ၌ သေဆုံးခဲ့ကြပြီး၊ ခါနန်ပြည်သို့မဝင်နိူင်သော ဣသရေ လလူတို့အား ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ပုံသက်သေကို ဖြစ်စေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီး၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ဝင်စားလိုငှါ၊ ထိုသူတို့ကဲ့သို့ ယေရှုကို မယုံကြည်သဖြင့်ဝင်စားခွင့်မရပါ။ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ယေရှုထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းမရှိ ဘဲ၊ သင့်အား သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့မိန့်တော်မူသည် “သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့်သာ မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့သိမြင်ကြ၏” (ဟေဗြဲ ၃း၁၉)။
သင်သည် ထာ၀ရအသက်ရှင်ခွင့် ရှိနေပါမည်လား?
(“ထာ၀ရအသက်ရှင်ခွင့်ရှိနေပါမည်လား?” ၁၈၃၉-၁၉၂၉ခုနှစ်၊ ဧလိရှဲ့အေ့
ဟောဖ်မန် သီကုံးပြီး သင်းအုပ်ဆရာမှ ဖြည့်စွပ်ပြင်ဆင်ပါသည်)။
“ထာ၀ရအသက်ရှင်ခွင့် ရှိနေပါမည်လား” ဓမ္မသီချင်းသီဆိုသည်!
“သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့်သာ မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့သိ မြင်ကြ၏။(ဟေဗြဲ ၃း၁၉)။
ဣသရေလလူတို့သည် ခါနန်ပြည်ကို ဝင်စားခွင့်မရှိကြပါ။ ခရစ်တော်သခင် ထံတိုးဝင်ခြင်း မရှိသောသူတို့ကတိတော်ပြည်သို့ ဝင်စားခွင့်မရရှိကြခြင်းသည် ယနေ့ လူတို့အဖို့ ပုံသက်သေတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မယုံကြည်သော ဣသရေလ လူတို့သည် ကတိတော်နှင့်ဆိုင်သော ခါနန်ပြည်သို့ဝင်စားခွင့် မိမိတို့တားဆီးခဲ့ကြ သည်။ မယုံကြည်သော ဣသရေလလူတို့ထံက သင်ခန်းစာသုံးခုကို ရရှိနိုင်ပါ သည်။ သင်သည်လည်း ခရစ်တော်သခင်ကို မယုံကြည်ပါက ကောင်းကင်ဘုံဝင်စား ခွင့်ရရှိမည် မဟုတ်ပေ။
၁။ ပထမ၊ ကြီးမားသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားကြရသော်လည်း၊ မယုံကြည်သောကြောင့် ကတိတော်ပြည်သို့မဝင်ရကြ
ထိုသူတို့အဖို့ ကြီးမားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ဘုရားရှင်သွန်းလောင်း တော်မူခဲ့သည်။ ထာ၀ရဘုရားသည် ဖါရောဘုရင်ကို တရားစီရင်သောအခါ ဣသရေ လလူတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သောက်ရေ၊ သုံးရေဟူသမျှ အသွေးကဲ့သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်ကို သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်သား တို့၏ ကျွဲ၊ နွား၊ တိရိစ္ဆာန်အပေါ် အနာဆိုးဘေး ကျရောက်ခြင်းနှင့်မိုးသီး ကပ်ဘေး များကြောင့် လယ်ပြင်၌ရှိသမျှအပင်များ ဖျက်ဆီးခဲ့သည်ကို ဣသရေလလူတို့သည် မြင်တွေ့ခဲ့ကြပါသည်။ အဲဂုတ္တုပြည်၌ မှောင်မိုက်ဘေး ကျရောက်ခဲ့သော်လည်း ဣသရေလတို့မူကား အလင်းထဲ၌ နေထိုင်ရကြသည်ကို သူတို့သိမြင်ခဲ့ကြရပြီးဖြစ် သည်။ ဣသရေလလူတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်သူ၊ ပြည်သားများနှင့်နန်းတွင်း ဖါရော ဘုရင်များအပေါ်သို့ အနာဆိုးဘေး၊ မီးသေးဘေးနှင့် အခြားသောကပ်ဘေးများ ကျရောက် တရားစီရင်ခဲ့သည်ကို သူတို့တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူတို့ သည် သိုးသူငယ်အသားကို ညတွင်းချင်းတွင်စားကြပြီး၊ အသွေးကိုမူကား အိမ်တံခါး ထုပ်နှင့်တံခါးတိုင် နှစ်ဘက်၌ သုတ်လိမ်းခဲ့ကြပြီး၊ ဘေးဥပဒ်သည် ထိုသူတို့ကို လွန် မြောက်ကာ၊ အဲဂုတ္တုပြည် သားဦးရှိသမျှတို့ကို သတ်ဖြတ်ကာ တရားစီရင်ခဲ့သည်ကို သူတို့သိခဲ့ကြသည်။ ဣသရေလ လူတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်ကျွန်ဘ၀မှ လွတ်လပ် ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏လက်တော်ဖြင့် ပို့ဆောင်သနားခဲ့သည်။ ထိုလူတို့နောက် အဲဂုတ္တုဘုရင်နှင့်စစ်သားများ လိုက်လံတိုက်ခိုက်ရန် ချီသွားသောအခါ ဘုရားရှင်သည် ဣသရေလလူတို့အဖို့ ပင်လယ်နီကိုခွဲခြမ်းပေးပြီး ခြောက်သွေ့သောကုန်းပေါ် လျှောက် သကဲ့သို့လျှောက်စေခဲ့သည်။ သူတို့သည်အဲဂုတ္တုပြည်၊ ဖါရောဘုရင်နှင့်စစ်သားများ အား ပင်လယ်အလယ်၌ နှစ်မြှပ်စေခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ထိုအခါ သူတို့သည် “ထာ၀ရဘုရားသည် ဘုန်းပွင့်လျှက်အောင်ပွဲခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ ကိုယ် တော်အားသီချင်းဆိုပါအံ့၊ မြင်းနှင့်မြင်းစီးသူရဲကို ပင်လယ်ထဲသို့ လှဲချတော်မူပြီ” (ထွက်၁၅း၁)။ သို့တိုင်အောင် “သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့်သာ မဝင်နိုင် သည်ကို ငါတို့သိမြင်ကြ၏”
ဒီကနေ့မနက်၊ မိတ်ဆွေတို့အထဲ၌လည်း ဘုရားသခင်ထံတော်မှ များစွာသော ကောင်းကြီး များခံစားသောသူများ ရှိကြမှာဖြစ်သည်! ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော် မည်ကဲ့ သို့ အတိုက်အခိုက်ခံခဲ့ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သိကြပါတယ်။ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို နှောင်ယှက်ဖျက်ဆီးပါသော်လည်း၊ ဘုရားရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား၊ အမြဲ ကယ်တယ်တော်မူသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အသိပင်ဖြစ်သည်။ များစွာသောသူတို့ကို ဘုရား သခင်၏ သားတော်ယေရှုခရစ်၏ အသွေးတော်နှင့်ရွေးနုတ် ကယ်တင်တော်မူသည် ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိနေကြပြီဖြစ်သည်။ မျက်မှောက်ကာလ၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုတောင်းသံ ကို ဘုရားရှင်နားညောင်း၍ အဖြေပေးတော်မူသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အသိပင်ဖြစ်သည်။ သင်တို့၏မျက်စိနှင့်နားအားဖြင့် ယုံကြည်သူမိခင်၊ဖခင်တို့ ဆုတောင်းသံကိုနား ညောင်းတော်မူ၏။ အံ့ဩဖွယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီး ချပေးတော်မူသည်ကို သင်တို့ လက်တွေ့ပင်ဖြစ်သည်။ သို့တိုင်အောင် သင်ကိုယ်တိုင်ကောင်းကင်ဘုံသို့ မဝင်စား နိုင်ရခြင်းကား အဘယ်သို့နည်း! ဣသရေလလူတို့အား တရားစီရင်တော်မူသကဲ့သို့၊ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားက သင့်အားအပြစ်စီရင်ရန် တောင်းဆိုနေပါ သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင့်သည်ကောင်းကြီးများစွာ ခံစားရသော်လည်း၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ မဝင်စားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍၊ ဣသရေလလူတို့၌ ကြီးမားသောကောင်းကြီးများကို ချပေးခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူတို့၌ မိန့်တော်မူသကဲ့သို့ ယနေ့လည်း ကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူသည်။ ထာ၀ရဘုရားသခင်သည် သူ့လက်ညိုးကို အသုံးပြု ၍ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကို ရေးသားခဲ့သည်။ ဘုရားရှင်သည် တဲတော်၏ အသန့်ရှင်း ဆုံးဌာနတော်မှ ဣသရေလလူတို့နှင့် ဆက်ဆံခဲ့သည်။ နေ့ရက်အစဉ် အသွေးတော် နှင့်ပူဇော်ရန် မိန့်တော်မူခဲ့ပြီး ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကို ပုံရိပ်ပေးခဲ့သည်။ အဘယ် မည်သော လူမျိုးကိုမှဘုရားသခင်သည် ထိုကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ရန်မိန့်တော်မမူခဲ့ပါ! သို့တိုင်အောင် ဣသရေလလူတို့သည် နာမထောင်လိုကြ၊ အမြဲငြန်းဆန်လေ့ရှိခဲ့ကြ သည်။ သူတို့သည် အယုံအကြည်ပင်မရှိခဲ့ပါ။ “သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် မယုံကြည် သောကြောင့်သာ မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့သိမြင်ကြ၏။” (ဟေဗြဲ ၃း၁၉)။
မိတ်ဆွေ၊ သင့်အားလည်းအထူးသဖြင့် နှုတ်ကပတ်တရားကို ပေးပြီးဖြစ်သည်။ ဣသရေလ သတင်းကောင်း ရှိနေပေပြီ။ ဣသရေလလူတို့အဖို့ ဆောင်ရွက်ပြုမူခြင်း ထက် သင့်အဖို့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ရှိနေပေပြီ၊ ဣသရေလလူတို့အားဖေါ်ပြ ခြင်းထက် သင့်အဖို့သမ္မာသစ် ကျမ်းစာအုပ်ရှိနေပေပြီ။ ဣသရေလလူတို့နှင့်အတူ အစဉ် ရှိနေသကဲ့သို့ သင်တို့နှင့်အစဉ် ရှိနေသည်မဟုတ်ပါလား? ဣသရေလ လူတို့၏ အပြစ်အဖို့ တိရိစ္ဆာန်များစွာ အသေခံပုပ်သိုးခဲ့ရပါသည်။ “သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်နိူင်” ထိုကဲ့သို့ သင့်အဖို့လည်းမှန်ကန်နေမှာလား?
ဘုရားရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘေးများအား သနားကြင်နာစွာဆက်ဆံခဲ့သည် ကို သတိရပါ။ “သင်တို့အဘများသည်... ငါ၏အမှုတို့ကို အနှစ်လေးဆယ်လုံးလုံး မြင်ရသောတောတွင်” (ဟေဗြဲ ၃း၉)ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။ အနှစ်လေးဆယ် လုံးလုံး၊ နည်းနည်း စုံစမ်းခြင်းရှိသော်လည်း ဘုရားရှင်သည် စိတ်ရှည်သည်းခံစွာဖြင့် ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့၏! နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့် သည်းခံခွင့်လွတ်ခြင်းအားဖြင့်လည်း ဦး ဆောင်ခဲ့သည်! အနှစ်လေးဆယ် လုံးလုံးနောင်တရှိရန် စောင်ဆိုင်းခဲ့ရသည်! သို့ပါ သော်လည်း သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်နိုင်ကြပေ!
ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို နှစ်လရှည်ကြာ၊ ကြားရပြီး ခရစ်တော်သခင်ထံ မချဉ်းကပ်ပါက သင်၌ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်နည်း? ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသ ပေါက်ကွဲမည်ဆိုပါက သင်၌ မည်ကဲ့သို့ဖြစ်လာမည်နည်း? သမ္မာကျမ်းစာ၌ သတိ ပေးထားပါသည်။ ဘုရားရှင်မိန့်တော်မူသည်မှာ၊ “ငါ့ဝိညာဉ်ည် လူတို့တွင်အစဉ်မ ဆုံးမရ”(ကမ္ဘာ၆း၃)။ “သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်နိုင်ကြ”ဟူ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် သတိပေးပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူတို့သည် ကြီးမားသောမင်္ဂလာကို ခံစားရကြပါသည်၊ သို့ပါသော်လည်း သူတို့သည်မယုံ ကြည်သောကြောင့်မဝင်နိုင်ကြပါ။ ထိုကဲ့သို့ သင်အသက်တာ၌လည်း သေချာပါမည် လား?
၂။ ဒုတိယ၊ မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် သူတို့ကို ချမ်းသာခြင်းထဲ ဝင်ခွင့်မပြု၊
“သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်နိုင်ကြ” အလွဲကြီးလွဲ များစေသည့် အရာသည် အပြစ်ကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ပါ။ အပြစ်ရှိသမျှကို ဘုရားသခင်သည်ခွင့်လွှတ် ပေးခဲ့ပါပြီ၊ မယုံကြည်ခြင်းကိုမူ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ပါ။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “ထို့ကြောင့် ငါဆိုသည်ကား ပြစ်များသောအပြစ်၊ ဘုရားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်အမျိုး မျိုးတို့နှင့် လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကို လူတို့သည်ရနိုင်ကြ၏။ ဝိညာဉ်တော်ကို ကဲ့ရဲသော အပြစ်နှင့် လွတ်စေခြင်းအခွင့်ကို လူတို့သည်မရနိုင်ကြ” (မဿဲ ၁၂း၃၁)။ ဘိုးဘေး တို့၏ ပြစ်မှားသောအပြစ် ဘုရားကိုကဲ့ရဲ့သောအပြစ်ကြောင့်၊ ယေရှုဘုရား၏ချမ်း သာခြင်းထဲမဝင်စားနိုင်ကြခြင်း မဟုတ်ပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့သော အပြစ်၊ သန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား အတွင်းနှလုံးသားထဲ ကိန်းဝပ်စေတော်မူ၍ ထိုစိတ်ဝိညာဉ်နှင့် ယေရှုကိုယုံကြည်ရန် ငြင်းဆန်သောအပြစ်ကြောင့် ခရစ်တော်၏ ချမ်းသာခြင်းထဲ မဝင်စားနိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “သူတို့သည် မယုံကြည်သော ကြောင့် မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့သိမြင်ကြ၏”။ အပြစ်ကသူတို့ကို ကောင်းကင်ဘုံသို့ ဝင်ခွင့်မပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မယုံကြည်ခြင်းကသာ သူတို့သည် “ငါ၏ချမ်းသာခြင်း” ထဲသို့ မဝင်စားနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်ပြီး ထိုသူတို့ကိုအခက်အခဲများက အနှောင့်အယှက်ပေးနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ခါနန်ပြည်သို့ သူတို့ရောက်သောအခါ ကြီးမားသောအုတ်တံတိုင်းများနှင့် လူထွားကျိုင်းများက သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအတားအဆီး များက ဘုရားသခင်အား သူ့လူတို့ကို ကတိတော်ပြည်သို့ ပို့ဆောင်ဖို့မတားဆီး နိုင်ပါ။ ဘုရားရှင်သည် ယေရိခေါမြို့အုတ်တံတိုင်းကို ပြိုလဲစေခဲ့ပါသည်။ ဘုရား ရှင်က တံပိုးမှုတ်သမားတို့အား ရှေးတန်းသို့ချီ၍ လူထွားကျိုင်းနှင့်အတားအဆီးများ ကို ဖယ်ထုတ်ခိုင်းပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မိမိလူတို့အား ဘုရားသခင်သည် အောင်မြင် ခြင်းနှင့် ကတိတော်မြေကို သိမ်းယူစေခဲ့သည်။ သို့တိုင်အောင် “သူတို့သည်မယုံ ကြည်သောကြောင့် မဝင်နိုင်ကြသည်ကို ငါတို့သိကြ၏” ထိုမယုံကြည်ခြင်းက သူတို့ ကို ချမ်းသာခြင်းထဲသို့ မဝင်စားစေနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။!
ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းကသာ သင့်အား ခရစ်တော်၏ချမ်းသာခြင်းထဲသို့ ဝင်စားခွင့် ပြုပါသည်! ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းက သင်မလုပ်နိုင်သော အရာ၊ အခက်အခဲများ၊ အရည်ပျော်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်၏မယုံကြည်ခြင်းကလွဲ၍ သင့်အား အဘယ်မည်သို့သော အရာကမှ သင့်ကိုမတားဆီးနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ယေရှုသခင်ထံသို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ယေရှုကိုအသက်သခင် ကဲ့သို့ မယုံကြည်ဘဲ ချမ်းသာခြင်းထဲသို့ ဝင်စားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ! ယေရှုမိန့်တော် မူသည်ကား “ငါသည် ဤမည်သောသူဖြစ်သည်ကို သင်တို့သည်မယုံလျှင် ကိုယ် အပြစ်၌ သေကြလိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏ (ယောဟန် ၈း၂၄)။ မယုံကြည်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်ပျက်စီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်! သင့်အပြစ်များကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ဖော်ပြပေးမည်ကို ကျွန်ုပ်သည်အစဉ်သင့်တို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ “ငါ့ကိုမ ယုံကြည်သောကြောင့် ဒုစရိုက်အပြစ်ကို ဖေါ်ပြမည်။ (ယောဟန် ၁၆း၉)။ ယေရှု ခရစ်ကို သင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပါက သင်လည်းပျက်စီးပါလိမ့်မည်! သင့်အဖို့မိန့် တော်မူသည်ကား “သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့်မဝင်နိုင်”ဟူ၍ မိန့်တော်မူ၏။ စပါဂျန် ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “အာနက်၏သားတို့အား သဲကန္တာရ၌လှည့်လည် ညဉ်းတွားသောကြောင့် ချမ်းသာခြင်းထဲ ဝင်စားခွင့်မပြုခြင်းမဟုတ်၊ မိမိတို့မယုံ ကြည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။” (ibid., p. 480).
၃။	တတိယ၊ အနည်းငယ်သော သူတို့သာယုံကြည်ကြပြီး၊ ကတိတော်တိုင်း ပြည်သို့ဝင်စားကြသည်။
အဲဂုတ္တုပြည်က ထွက်လာသောသူတို့တွင် အနည်းငယ်သာကတိတော် ပြည်သို့ဝင်စားကြသည်။ အလွန်အမင်းပင် နည်းလွန်းလှပါသည်! ယောရှုနှင့်ကာ လတ်တို့ နှစ်ဦးသာ အဲဂုတ္တုပြည်မှခါနန်ပြည်သို့ဝင်စားခဲ့ကြပြီး၊ မောရှေမူကား အရှင် လတ်လတ် ခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြောင်းလဲပြီး ချမ်းသာခြင်းထဲသို့ဝင်စား တော်မူခဲ့သည်။ ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော် မူသည်ကား၊
“သူတို့ ဘိုးဘေးတို့အား ငါပေးမည်ဟု ငါကျိန်ဆိုသော ပြည်ကောင်းကို ယေဖုန္န၏သားကာလက်မှတပါး ဤ ဆိုးသော လူမျိုးတစ်စုံတစ်ယောက်မျှ ဆက်ဆက်မမြင်ရ။ သင့်လက် ထောက် နုန်၏သားယောရှုသည် ဝင်စားရမည်။ သူသည် ဣသရေလအမျိုး အမွေခံစေမည့်သူဖြစ်သောကြောင့် သူ့အား ပေးလော့။ (တရားဟော ၁း၃၅ç ၃၆ç၃၈)။
ထောင်ပေါင်းများစွာ၊ အဲဂုတ္တုပြည်မှထွက်လာကြသော ဣသရေလလူတို့ အထဲမှ နှစ်ဦးသာကတိတော်ခါနန်ပြည်ကို ဝင်စားခဲ့ကြသည်! ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ? “ထိုသို့ ခေါ်သောသူ အများရှိသော်လည်း၊ ရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏ (မဿဲ ၂၂း၁၄ç ၂ဝး၁၆)။ ဆိုလိုသည်မှာ “အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက် သောလမ်းနှင့် တံခါးသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍ တွေ့ဝင်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏” (မဿဲ ၇း၁၄) ရွေးချယ်ရာ၌ အမြဲပင်နည်းပါးကြပါသည်။ ဧနောက် အချိန်အခါ၌လည်း “လူရှစ်ယောက်တို့ကိုသာ ကယ်တင်ခဲ့သည်” (၁ပေ ၃း၂၀) ပရောဖက် ဧလိယခေတ်တုန်း၌လည်း “ဣသရေလအမျိုးသား ခုနှစ်ထောင်တို့ကို ငါ့အဖို့ငှါ ကျန်ကြွင်းစေပြီဟု မိန့်တော်မူ၏” (၃ရာ ၁၉း၁၈၊ ရောမ ၁၁း၄)။ တမန် တော်ကြီး ရှင်ပေါလု အချိန်၌လည်း “ကျေးဇူးတော်အတိုင်း ရွေးကောက်တော်မူသော အကြွင်းအကျန် ရှိသေး၏” (ရောမ ၁၁း၅)။ ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား “သိုးစုငယ်၊ သင်တို့သည် မကြောက်ကြနှင့်” (လုကာ ၁၂း၃၂)။ အဲဂုတ္တုပြည်ကထောင်ပေါင်းများ စွာ ထွက်လာကြသော်လည်း၊ ယောရှုနှင့် ကာလက်တို့နှစ်ဦးသာ ကတိတော်ပြည်ကို ဝင်စားခဲ့ကြသည်ကို အံ့ဩစရာဖြစ်မည်မထင်ပါ။ “အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်သော လမ်းနှင့်တံခါးသည် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းသည်ဖြစ်၍ တွေ့ဝင်သောသူတို့သည် နည်း ကြ၏” (မဿဲ ၇း၁၄)
သင်လည်း ကောင်းကင်သို့ရောက်သော လူနည်းစုအဝင်ဖြစ်ပါမည်လား? သိပ်ပြီးလည်း မိမိကိုကိုမရမ်းလိုက်ပါနှင့်! ကျွန်ုပ်၏အမှုတော်ဆောင်သက်တမ်း (၁၄)နှစ်ထိတိုင် ရာပေါင်းများစွာသောသူတို့လည်း ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ဟု ထင်မှတ် ခဲ့ကြသည်။ အများစုတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်စ္ထားကြပါ။” များစွာသော တိရိစ္ဆာန်များသည် ထိုသူတို့အသက်အဖို့ သဲကန္တာရ၌ ပုပ်သိုးသေကြေခဲ့ရသည်!
ကာလက်နှင့်ယောရှုတို့လည်း သဲကန္တာရ၌ လဲသေကြသောသူတို့ထက် သာ လွန်ကောင်းမြတ်၍ “ချမ်းသာခြင်းထဲ” ဝင်စားကြခြင်းမဟုတ်ပါ၊ လုံး၀မဟုတ်ပါ! သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဝင်စားကြခြင်းဖြစ်သည်။ “ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့် မဟုတ်၊ ကိုယ်အလို အလျှောက် ရောက်ခြင်းလည်းမဟုတ်၊ ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ဖြစ်၍၊ အဘယ်သူမျှ ဝါကြွားစရာအခွင့်မရှိ” (ဧဖက် ၂း၈-၉)။ ကာလက်နှင့်ယောရှု တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဝင်စားကြခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့်အကြောင်း ကြောင့် ဝင်စားနိုင်မည်မဟုတ်၊ ထာ၀ရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကား “သင်တို့ဘုရား သခင်ထာ၀ရဘုရား၏ စကားတော်ကို ထိုအမှု၌ သင်တို့မယုံကြည်ပါတကား” (တရား ၁း၃၂)။
“သင်တို့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရကြဟု ကျိန်ဆို တော်မူသော သူတို့ကား၊ မယုံကြည်သောသူမှတပါး အ ဘယ်သူနည်း။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် မယုံကြည်သော ကြောင့် မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့သိမြင်ကြ၏ (ဟေဗြဲ ၃း၁၈-၁၉)။
ကာလက်နှင့်ယောရှုတို့နှစ်ဦးတို့သာ ကတိတော်ပြည်ကို ဝင်စားရခြင်းအ ကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကာလက်၌လည်း၊ “ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမ”များလည်း ရှိတယ်။ မယုံကြည်တဲ့အတွက် မဝင်စားကြဘူး၊ ထိုသူတို့ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “သူ နှင့်အတူ လိုက်သွားသောသူတို့က၊ ထိုပြည်သားတို့ကို ငါမတိုက်နိုင်။ သူတို့သည် ငါတို့ထက်သာ၍ အားကြီးကြသည်ဟူ၍၎င်း” (တောလည် ၁၃း၃၁)။ဟူ၍ ညဉ်းတွား ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့ပါသော်လည်း ကာလက်သည် ယုံကြည်ခြင်း မရှိသောသူ့ညီ အစ်ကိုများနောက်သို့ မလိုက်ခဲ့ပါ။ ကာလက်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
“အကျွန်ုပ်နှင့်အတူသွားသော ညီအစ်ကိုတို့သည် လူများ စိတ်ပျက်စရာပြုသော်လည်း အကျွန်ုပ်သည် အကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ထာ၀ရဘုရားနောက်တော်သို့ လုံးလုံးလိုက်ပါ၏ (ယောရှု ၁၄း၈)။
ကတိတော်ပြည်သို့ ကာလက်ဝင်စားရန် သူ့ညီအစ်ကိုများက တားဆီး၍မရနိုင်ပါ! မိတ်ဆွေအတွက် ကောင်းသောသင်ခန်းစာပင်ဖြစ်၏! ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းများက၊ ကတိတော်ပြည်ဝင်စားရန် သင့်အားမဆီးတားပါစေနှင့်! သူ တို့သည် သင့်စိတ်နှလုံးသားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်သံသယထဲ “မနှစ်မြှပ်” ပါစေနှင့်! ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်ကား “အကြင်သူသည် ငါ့ကိုချစ်သည်ထက် မိဘကိုသာ၍ ချစ်၏၊ ထိုသူသည် ငါနှင့်မထိုက်တန်” (မဿဲ ၁ဝး၃၇) ။ မယုံကြည်သောသူတို့က ပုံမှန်ဘုရားကျောင်း သွားလာနေသော သင့်အားမဆီးတားပါစေနှင့်။!
ယောရှုသည် ကာလက်နှင့်အတူ ခါနန်ပြည်ကို ဝင်စားသောသူ တစ်ဦးဖြစ် သည်။ သူငယ်စဉ်အရွယ်၌ပင် မောရှေနှင့်အတူ အမှုတော်ထမ်းဆောင်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ ဣသရေလ လူတို့ရွှေနွားရုပ်လုပ်ပြီး ဖေါက်ပြန်နေကြသည်ကို ယောရှုသည် မောရှေ အား တိုင်ကြားခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ (ထွက် ၃၂း၁၇)။ အခြားသောဣသရေလလူတို့ သည် မိမိတို့တဲအိမ်၌သာဘုရားကို ကိုးကွယ်ခဲ့စဉ်၊ ယောရှုသည် တဲတော်ထဲက မထွက်ဘဲ ဘုရားသခင်နှင့်အတူ ရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ (ထွက် ၃၃း၁၁)ထိုနေရာ၌ ဘုရား သခင်နှင့်အတူ ရှိနေခဲ့သည်။ အပြစ်ပြုနေကြသော ဣသရေလူတို့ကို မောရှေအပြစ် တင်ကြိမ်းမောင်းသောအခါ ယောရှုသည် မောရှေနှင့်အတူရှိနေခဲ့၏။ ယောရှုသည် ဘုရားရှင်နှင့်အတူ ရှိနေသည်ကို သိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်းရှိသော လူငယ်ယောရှုသည် “ငါ၏ချမ်းသာခြင်း” ထဲဝင်စားခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ ၃း၁၈)၊ အပြင် ဘက်မှ တက်ရောက်လာသော လူငယ်တို့သည် “အသင်းတော်မှ ပေါက်ဖွားလာသော လူငယ်” တို့ကို ဆန့်ကျင်လျှက် ချမ်းသာခြင်းထဲဝင်စားကြွပြွါလိမ့်မည်။။ြွက တစ်ယောက် တည်း အထီးကျန်ဆန်စွာ ဘုရားသခင်ကို ဆာငတ်ရှာဖွေသော သူတို့သည် ချမ်းသာ ခြင်းထဲဝင်စား ကြွပြွါလိမ့်မည။ြွက၊ အတွေးအခေါ်မရှိ၊ ဇာတိပကတိလူငယ်တို့မူကား ချမ်း သာခြင်းထဲ ကြွဝြွင်စားရလိမ့်။ြွကမြွည် ကြွမြွဟုတ်ပါ!။ြွက သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင် နိုင်သည်ကို ငါတို့သိမြင်ကြ၏။” ကာလက်နှင့်ယောရှုတို့နှင့်အတူ ချမ်းသာခြင်း ထဲသို့ ဝင်စားလိုသောလူငယ်၊ မောင်မယ်များလည်း ဤသီချင်းကို မိမိတို့စိတ်နှလုံး သားထဲ သီဆိုလိုက်စမ်းပါ။
ထိုသီချင်းသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်လူငယ်တို့၌ ပျံ့နှံ့သော သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါသည်။ သံစဉ်ကိုလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဖြစ်သည်။ (source: John R. Rice, D.D., Soul-Stirring Songs and Hymns, Sword of the Lord Publishers, 1972, number 316) သီချင်းစာသားခံစားမှုကို အရှေ့မြောက်ဖက် အက်ဆန်ပြည်မှ လူတဦးက ရေးဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့မိသားစုသည် ၁၉ရာစုအလယ် တနူsh mငျငသညမေပ အားဖြင့် ခရစ်ယာန်အသက်တာ၌ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ပါ သည်။ မြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများက ယုံကြည်ခြင်းကို (စွန့်လွတ်ရန်) ကြိုးစားခဲ့ကြပါ သော်လည်း သူသည် ယုံကြည်ခြင်းကို သီချင်းစာသားအားဖြင့် ဖွဲ့နွဲ့ခဲ့ပါသည်။ “ယောရှုနောက်လိုက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီ” ဟူသောသီချင်းဖြစ်ပါသည်။ သူ့မိသား စုများကို ခြိမ်းခြောက်မှုရှိလာသောအခါ ဆက်လက်ပြီး”ကျွန်ုပ်ကို စွန့်သော်လည်း နောက်တော်သို့ လိုက်မြဲလိုက်ပါမည်”ဟူ၍ စပ်ဆိုခဲ့သည်။ “ငါ့ရှေ့မှာကားတိုင် ၊ ငါ့ နောက်မှာ လောက” ဟူသော သီချင်းဆိုရင်း၊ သူ့ဇနီးနှင့် သူတို့နှစ်ယောက် အသက် သေခဲ့ကြရပါသည်။. ဤသို့ သောသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းက နိုင်ငံတော်လူကြီးမင်းနှင့် ရွာသူရွာသားတို့၏ အသက်တာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါသည်။ (Source: Wikipedia) ၎င်းသီချင်းကိုသီဆို သည်။
“သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် ချမ်းသာခြင်းထဲသို့မဝင်စားနိုင်ကြ” သင်သည် ချမ်းသာခြင်းထဲ ဝင်စားပါမည်လား၊ သင်သည် ယေရှုသခင်ထံ တိုးဝင် ချဉ်းကပ်ပါမည်လား၊ အသွေးတော်၌ သင့်အပြစ်များကိုဆေးကြောပြီး ကယ်တင် ခြင်းခံယူပါ။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်း ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော်ထဲ ဝင်စားနိုင်ပါမည် လား။ ထိုသီချင်းပြန်လည်သီဆိုသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာဂရိတန် အယ်ချန်မှ ဟေဗြဲ ၃း၈-၁၉ အထိဖတ် ကြားပေးပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ် ဂရိဖက်စ်မှ “အို အကျွန်ုပ်မျက် ကန်း” ၁၇၄၈-၁၈၁၆ နာသန်စထရောင်း သီကုံးရေးသားထားသော ဓမ္မသီချင်းသီဆို ပေးသည်။
ဒေါက်တာ အာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ် ဟောကြားသည်။
“သင်တို့သည် ငါ၏ချမ်းသာထဲသို့မဝင်ရကြဟု ကျိန်ဆိုတော်မူသော သူတို့ကား၊ မယုံကြည်သောသူမှတပါး အဘယ်သူနည်း။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် မယုံကြည်သောကြောင့် မဝင်နိုင်သည်ကို ငါတို့သိမြင် ကြ၏ (ဟေဗြဲ ၃း၁၈-၁၉)။
(ဟေဗြဲ ၃း၁၁၊ ၁ကော ၁ဝး၁၁)။
၁။ ပထမ၊ ကြီးမားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားကြရသော်လည်း မယုံကြည် သောကြောင့် ကတိတော်ပြည်သို့ မဝင်ရကြ၊ (ထွက် ၁၅း၁၊ ဟေဗြဲ ၃း၉၊ ကမ္ဘာ ၆း၃)။
၂။ ဒုတိယ ၊ မယုံကြည်ခြင်းကြောင့် သူတို့ကို ချမ်းသာခြင်းထဲသို့ ဝင်ခွင့်မပြု၊ (မဿဲ ၁၂း၃၁၊ ယောဟန် ၈း၂၄၊ ၁၆း၉)။
၃။ တတိယ ၊ အနည်းငယ်သောသူတို့သာ ယုံကြည်ကြပြီး ကတိတော်ပြည်သို့ ဝင်စားကြသည်။ တရားဟော ၁း၃၅၊ ၃၆၊ ၃၈၊ မဿဲ ၂၂း၁၄၊ ၂ဝး၁၆ç ၇း၁၄၊ ၁ပေ ၃း၂၀၊ ၃ရာ ၁၉း၁၈၊ ရောမ ၁၁း၄၊ လုကာ ၁၂း၃၂၊ ဧဖက် ၂း၈-၉၊ တရားဟောရာ ၁း၃၂၊ တောလည် ၁၃း၃၁၊ ယောရှု ၁၄း၈၊ မဿဲ ၁ဝး၃၇၊ ထွက် ၃၂း၁၇၊ ၃၃း၁၁။